XASUUSTEYDII XUKUUMAD SOOMAALIYEED OO LA RIDAYO!!. (Maqaal)
Home » Qormooyinka » XASUUSTEYDII XUKUUMAD SOOMAALIYEED OO LA RIDAYO!!. (Maqaal)	XASUUSTEYDII XUKUUMAD SOOMAALIYEED OO LA RIDAYO!!. (Maqaal)
09/03/2017	1,552 Views Taariikhdu waa 28-ka Oktoobar, Sanadka 2001-da, waa xilli subax ah oo ay maalintu ka duwantahay Maalmihii kale ee lasoo dhaafay.
Saaka, waxaan u barqo-kacayaa Dugsiga sare ee Booliska ee magaalada Muqdisho, waxaan goor hore rabaa inaan gaaro Goobtaas oo Fadhi u ah Golaha Baarlamaanka KMG ah ee Soomaaliya si aan xog hor-dhac u ah waxa loo muddeysanyahay u sii helo.
Bannaanka Hoolka weyn ee lagu shiro, waxaa koox koox u taagan Xildhibaanno fara badan, hadalka way gaabinayaan markasta oo aad u dhawaato, malaheyga si aan sheekadooda loo ogaan.
Meeshu aad ayey u mashquul badantahay oo intaas waxaa Afka lagu hayaa Mustaqbalka Xukuumadda Ra’iisul wasaare Cali Khaliif Galeyr oo ay maanta Middidii gowracu qoorta ka saarantahay. si aan bal xaalka usii darso ayaan marba Xildhibaan la faqayaa oo aan weydiinayaa sida xaalka Xukuumaddu noqon doonto.
Badankood Xildhibaanada aan la hadlayo waxaa ka go’an in xilka laga tuuro Ra’iisul wasaaraha oo ay Madaxweyne C/qaasim Salaad Xasan is qabteen, waxay Xildhibaanadu ka war qabaan Codadka aan bad baadin karin ee ay Xukuumaddu heysato, waana wax aan 30 Xildhibaan ka badnayn.
Allaha u naxariistee Wadaaygeey Maxamed Aadan Guuleed (Caano-Geel) oo Tifaftire ka ahaa Wargeyska Xog-ogaal ayaa meel iiga soo muuqday, xageygiisa ayaan u dhaqaaqay si aan isku xog warreysanno, wuxuu saaxibkeey igu raacsanyahay in Xukuumaddu heysato Codad 25 ilaa iyo 30 Cod u dhaxeeya.
Waxaa hadda la isku diyaarinayaa oo Xildhibaanada laga codsanayaa inay gudaha Xarunta galaan si loogu diyaar garoobo Codka kalsoonida ee loo qaadayo Ra’iisul wasaaraha oo Dalka ka maqan iyo Xukuumaddiisa.
Saaxibkeey Xasan Bariise oo u shaqeeya BBC-da ayaan ku ballanay inaan waco marki howshu soo dhowaato. telefoonkeygi Nokia ha ahaa ayaan meel luuq ah iskula laabay una sheegay inuu soo dhaqso, Xasan sooma daahine dhaqsiba wuxuu Goobta soo gaaray Xildhibaanada oo fadhiya una diyaarsan inay codeeyaan.
Aniga iyo Xasan Bariise, waxaan istaagnay meel ku beegan Xildhibaanada si aan u aragno Gacmaha kor loo taagayo ee aan Farxad galin doonin Ra’iisul wasaare Galeyr.
Sidii horeyba noogu muuqatay Cod aqlabiyad ah ayaa xilkii looga qaaday Xukuumaddii ku meel-gaar ah ahayd ee Xilka qabatay 8-dii Okboobar sanadkii 2000.
Waxaa Makarafoonka gacanta midig ku heysta Guddoomiyihii Golaha Alle ha u naxariistee Cabdalla Deeroow Isaaq si uu natiijada ugu dhawaaqo. Tirada codadka xukuumadda lagu riday hadda ma xasuusto, wuxuuse Guddoomiyuhu ku dhawaaqay in Xukuumaddii kalsoonidii Baarlamaanka weyday, sidaasi darteedna Madaxweyne C/qaasim looga fadhiyo inuu muddo 30 maalmood gudahood ah kusoo magacaabo Ra’iisul wasaare soo dhisa Gole xukuumad cusub.
Buuq iyo Sawan ayaa markiiba is qabsaday, waxay indhaheennu qabanayaan Xildhibaano careysan oo Kuraastii Caagga ahayd ee ay ku fadhiyeen la boodaya una jiheysan dhanka Guddoomiyaha. Ciidamo dhar caadi ah ku labbisan ayaa markiiba isku gedaamay Guddoomiye Deeroow, si aan loo wax-yeelleyn.
Halkii aan taagnayn ayuu isaga oo khalkhalsan noogu yimid, wuxuu ka cararayaa Xildhibaanno kuraas tuuraya oo aan sidaas u tiro badnayn.
Aniga iyo Xasan Bariise, fursad ayaa noosoo gacan gashay, waxaan labada garab ka galnay guddoomiyaha Baarlamaanka oo u socda Kuraas meel kore taalay. buuq la’aan ayaan halkaas wareysi dheer uga qaadnay.
Waxaan maalintaas nasiib u yeeshay inaan Goob-joog u noqdo meel Xukuumad Soomaaliyeed lagu ridayo markii iigu horreysay nolosheeyda iiguna dambeysay.
taasi waxay dabcan ahayd billowgii Hannaan Dimoqaraadi ah oo Soomaaliya ka curtay iyo Xukuumaddii ugu horreysay oo uu baarlamaan rido tan iyo 1967-kii.
Dariiq ayuu ahaa haddii si loo fiiriyo wanaagsan si kalena Soomaaliya u horseeday Mooshinno Xukuumado badan lagu riday ,Shaqo badanoo laga qaban lahaana dib u dhigtay.
Waxaa qoray: Qaasim Cabdulle Nero.
Previous: FIIRSO SAWIRO: Wado Tagta Isbitaal Keysanay oo Dhismo lagu Bilaabay Muqdisho
Next: Dowladda Itoobiya oo Safiir cusub usoo magacowday Dalka Soomaaliya